UNESCO World Heritage Sites In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > UNESCO World Heritage Sites In Europe
Europe ane UNESCO World Heritage nzvimbo zvinokwezva mamiriyoni vashanyi. Pane dzakasiyana-siyana zvinotyisa kuona - kubva mapurani uye tsika sezvivako, kune dzinongoitika zvishamiso Old Continent.
With munzvimbo dzakawanda saka kusarudza kubva, zvingatiomera kuti mufambi kuti chisarudzo chokuita rwendo. Kuti akubatsire kusarudza UNESCO World Heritage nzvimbo Europe kutanga kuona, hatina zvekunyora pfupi pasi:
UNESCO World Heritage Sites muFrance
Vamwe zvikuru chinozikamwa UNESCO World Heritage nzvimbo muFrance zvinosanganisira zvishamiso zvakafanana Versailles. Ndicho inonyanya akakurumbira uye yakanaka zvikuru ichengetedzwe youmambo yakagara Furanzi. Imwe nzvimbo yakanaka kutaura ndiro Abbey Church Saint-Savin-sur-Gartempe. Zviri chechi Romanesque kubvira muzana remakore rechi9 muna Poitou, Aquitania itsva.
Nokuti vafambi vanoda kuona zvinhu zvechitendero, panewo mashoko Chartres Cathedral. Izvi Roman Catholic Chiesa yakatangira muzana remakore rechi13, uye iwe angazviziva kumadokero Paris. pakupedzisira, pane Mont Saint-Michel uye Bay kwayo. It chitsuwa pamwe inokosha masvingo kudanana kubva 8 AD, aine yemamongi sezvo yayo huru mamiriro.
Paris kuenda kuLyon Highspeed Chitima
UNESCO World Heritage Sites mu Itari
Italy rizere UNESCO World Heritage zvepaIndaneti, saka isu tichati kutaura zvimwe inonyatsozivikanwa kupfuura vaya. chichiita redu rokutanga ndivo matongo nzvimbo Pompei, Herculaneum uye Torre Annunziata. kukosha kwavo iri yokuti ndivo Zvisaririra vekare maguta vakavigwa kuputika Mt. reVesuvius mu 79 AD. Panewo Castel del Monte, yamambo chomuzana remakore rechi13. Sezvo mixes zvinogona kuitwa EuropEAN Cistercian Gothic uye Muslim akitekicha, zvinonakidza munhu pamberi.
Uyezve, Uyewo Italy musha Piazza del Duomo muna Pisa, akakurumbira Leaning shongwe. pakupedzisira, pane kuti wenhoroondo Inzvimbo maguta makuru maviri, Florence uye Rome. In Florence, Zvivako yokumiririra Renaissance mapurani manyorerwo muri anofanira-kuona. Regai kurasikirwa Uffizi, Basilica of Santa Croce, uye Florence Cathedral. In Roma, unofanira kuongorora pakati hweRoma uye Catholic nyika riine nhamba Zvivako uye nemagariro nzvimbo.
Bari para Florence Zvitima
Salerno kuna Florence Zvitima
Germany ndiyo nyika nematende, machechi, uye zvimwe zvinoshamisa UNESCO World Heritage zvepaIndaneti. Aachen Cathedral is the burial place of Charlemagne and the first-built vaulted structure since antiquity. The inonyanya kufarirwa nhangaruvazhe mu Jerimani ndiyo imwe chechi, ichi mumwe Cologne. Zvakatora emakore kuvaka kubvira 1248. Uyezve, kumiganhu hweRoma ndiwo inokosha kushanya. Munhu wose anofanira kuona Hadrian Wall uye Antonine Wall, izvo dzakavakwa 122 AD uye 142 AD, zvichienderana zvakadaro.
Exploring Upper Middle Rhine Valley ari kuva chisingakanganwiki ruzivo. nharaunda iyi musha akawandisa nematende uye maguta nenhoroondo. pakupedzisira, pane Wurzburg Residence pamwe Court Gardens uye Residence Square. Zviri rimwe guru dzoushe muGermany, muenzaniso mukuru Rococo maitiro.
Ava shomanana vazhinji anoshamisa UNESCO World Heritage nzvimbo Europe. With mazano edu, haugoni kuenda kuipa kuronga rwendo rwenyu. Unogona kusvika Nzvimbo idzi nechitima kubva siyana zvikuru maguta European.
Ready kuongorora chii Europe ine kupa? Rongai kushanya kwenyu chinozikamwa UNESCO World Heritage nzvimbo uye bhuku rako chitima matikiti nhasi!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano:https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/unesco-world-heritage-sites-europe/- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
europetravel longtrainjourneys trainjourney Tranride chitima kufamba Mazano travelfrance travelgermany travelitaly unesco